Uqweqwe noma lace Ezidliwayo. Uqweqwe ukuze intambo wezandla zakhe
Uqweqwe akunzima kakhulu ukwenza ngenxa izintambo zezicathulo ngezandla zabo. Nokho, inqubo zokuhlobisa kophudingi kudinga umcabango ekhethekile Culinary. Phela, uma ungeke ukwazi ukudweba, uthola sibalo amahle futhi ngomusa wena cishe ukuphumelela. Nakuba abanye besifazane aye ayisebenzisa kaningi iqhinga. Zenza amaphethini usebenzisa ezihlukahlukene izifanekiso.
Namuhla sizokutshela mayelana nendlela ukwenza Uqweqwe ngoba izintambo zezicathulo ngezandla zabo. Ngaphezu kwalokho, ukunakwa kwakho kuyinto ekilasini master kumaphethini vyrisovyvaniyu ezahlukene izokwethulwa. Ukusebenzisa amasu kuchaziwe ngezansi, uyokwazi ukuhlobisa ngokuphelele yimuphi nama-dessert.
Ngaphambi kokuthi ngikuxoxele kanjani ukwenza Uqweqwe ngoba izintambo zezicathulo ngezandla zabo, kufanele amtshele ukuthi imayelana.
Lukashukela kuyinto umdwebo amaprotheni mass, okuyinto senzelwe womshini amaphethini ngobuningi zokuhlobisa confectionery. Ekuqaleni, uhlaka enjalo ke uphendulela white. Kodwa uma kunesidingo esikhethekile, kungenziwa ngokungeza udayi ezinemibala ehlukahlukene.
Uqweqwe ukuze intambo ngezandla zakhe kwenziwa ngokushesha futhi kalula. Ngemva ekuhambisaneni nayo yonke nezidingo kadokotela kumele zimiswe kuqhathaniswa uqweqwe mass plastic kini. Ngokuvamile, it is etholwe ukugaya sieved ushukela oluyimpuphu ne fresh iqanda omhlophe. Futhi ngokuvumelana izithako ngempela ezicela iyiphi acidulant (isib fresh kalamula, kremortartar, ezomile citric acid nokunye.). Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi mass amaprotheni Kwatholakala ductile nabalolongeka.
Indlela yokwenza Uqweqwe plastic?
Njengoba kushiwo ngenhla, ikhekhe uqweqwe lukashukela, noma ezinye ukudla okunoshukela kufanele abe nokunwebeka. Ngezinye izikhathi lo mphumela kunzima ukufeza ngokungeza ngesisekelo eyodwa ejenti acidifying kuphela. Kulokhu abapheki wazibonela zidinga ukusetshenziswa eminye glucose isiraphu noma esincane glycerin. Nokho, isithako yokugcina zingenza mass amaprotheni okunamathelayo ukuze kuyoba nzima ukuhlukanisa ke kusukela substrate plastic. Yingakho le ngxenye Kunconywa ukuba isetshenziswe esikhathini lamabutho alandelayo Uqweqwe is akulindelekile. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ezimweni lapho nokufaka amaprotheni mass ngqo phezu dessert.
Ezinye izindlela ukudala
Uqweqwe izandla zabo kungenziwa hhayi kuphela ukusetshenziswa amaprotheni. Phela, kukhona nezinye izithako ukwakha mass ukudweba. Ngokwesibonelo, indlela eyayithandwa kakhulu ukupheka, base confectionery ukusetshenziswa-albumin. Omunye amakhilogramu yalolu ketshezi ingena esikhundleni mayelana 316 amaqanda qanda. Ngaphezu kwalokho, kukhona nezinye izithako ukuthi kaningi zizalwa zingazange asetshenziswe ekhaya futhi kwezinga lemikhiqizo yezimboni.
Uqweqwe: iresiphi, master class ku ukulungiswa amaprotheni mass
Lapho zibona imiphumela yokugcina abantu abaningi ungaqiniseki ukuthi bazokwazi ukwenza lokhu umhlobiso ngezandla zakho. Kuleli ngifuna ukusho into eyodwa: ungazami - Angazi.
Ngokuvamile, kufanele kuphawulwe ukuthi Uqweqwe kuya ikhekhe, kanye neminye imikhiqizo confectionery, ungalilahli njengoba kunzima njengoba kubonakala kusukela ekuqaleni. Isihluthulelo lokhu - ngokuqinile sivumelane nazo zonke izimfuneko kadokotela. Kungenjalo, mass amaprotheni engakutholi ukungaguquguquki kubalulekile ukulungiswa ezihlukahlukene lace futhi amaphethini.
Ngakho, uqweqwe lukashukela, isithombe okuyinto okwethulwa kulesi sihloko kudinga ukusetshenziswa kwemikhiqizo elandelayo:
fresh inkukhu iqanda omhlophe - 1 pc.
Powder ushukela sifted - 250 g;
fresh kalamula noma citric acid ezomile - mayelana ½ dessert nezinkezo;
isixazululo glucose eziqinile - dessert spoon (isicelo uma uthanda).
Inqubo imikhiqizo ekulungiseleleni
Ngaphambi kokwenza Uqweqwe ekhaya kufanele ukulungiselela zonke izithako. Ukuze uqale nge amaqanda qanda kumele ahlukaniswe ngokucophelela kusukela isikhuphasha. Uma ufaka le ngxenye yesibili angamukelekile kuqala. Kungenjalo, umhlobiso ngeke zisebenze.
Kukhululwa esimhlophe kusukela isikhuphasha, kufanele ibekwe endishini ejulile futhi kancane ukushaya ngemfoloko. Inhloso yale nqubo akuyona ukwenza Foam Fluffy oqine, futhi zingaphazamisa viscous isakhiwo ingxenye, ngokuguqula ke ibe mass okuwuketshezi. Okweqile air Bubbles nenqwaba-Uqweqwe hhayi wamukelekile.
Ngokuqondene powder, ingabe kufanele yenziwe yini ngokusebenzisa grinder, noma ukuthenga esitolo ngomumo eyenziwe. Uma ukuthenga lo mkhiqizo ungenalo aphumelele, sincoma umane uhlunga ushukela ngokusebenzisa ngesihlungo esihle kakhulu. Njengoba kwaziwa kahle amnandi isithako ngobuningi njalo iqukethe ethile powder.
Inqubo ukulungiselela mass nokunwebeka
Ngakho, sekuyisikhathi ngikuxoxele kanjani kwenziwe kahle Uqweqwe. Recipe, master class ekuphekeni lesi sidlo ngokuqinisekile ukukusiza ukuhlobisa amakhekhe kanye neminye imikhiqizo confectionery.
Ngemva iqanda omhlophe is ophehliwe usebenzisa nalokho kancane wishbone kufanele kancane kancane uthele ushukela oluyimpuphu. Kulokhu, izithako kudingeka njalo wagcoba ubebushelezi.
Ngemva kwemizuzu embalwa ye eshukumisayo olunzulu (cishe phakathi ukupheka) ukuze amnandi iqanda omhlophe kuyadingeka ukuze ungeze ezomile citric acid. Uma unquma ukusebenzisa fresh kalamula, kungcono uthele ekupheleni, kanye namandla isixazululo glucose. By endleleni, ngo kwaqedwa okuholela mass homogeneous kufanele wanezela futhi wayefisa umbala ukudla (mawuthanda).
Ngakho, ngamaqoqo ngokungeza iqanda omhlophe ushukela oluyimpuphu kanye zonke bezihlikihla ngamandla, kufanele uthole, viscous mass plastic ozinzile futhi eyohlobo. Kulesi Uqweqwe ukupheka kubhekwa ephelele.
Amafomu Ukudweba amaprotheni mass
Ukuze ufunde indlela ukwenza umdwebo mass ketshezi, siyatshelwa. Kodwa ngezinye izikhathi abapheki badinga nezimo futhi uqweqwe lukashukela. Indlela ukupheka? Lokhu kudinga ukusetshenziswa ushukela oluyimpuphu ngaphezulu. Ngamanye amazwi, kumelwe wanezela nje mass amaprotheni iyeke abanamathela izintende. Ngenxa yalokho, kufanele uthole mastic-Uqweqwe. Lisibekelwe kahle amakhekhe abacaphuni noma namakhekhe. Ngenxa yalesi mass okuholela kumele kancane podpylit ushukela oluyimpuphu bese Roll zibe ukuma ofiselekayo usebenzisa i-pin rolling. Phela, in the unamathisele, kanye Uqweqwe ketshezi, ungase futhi wengeze ukudla Umbala, wasinikeza a luhlaza ethile.
Ukuze lokho ukusetshenziswa?
Njengoba ubona, ngokuba lace Uqweqwe (iresiphi amaprotheni inhlama ngazo ngenhla) ayidingi ukusetshenziswa imikhiqizo eminingi ezibizayo futhi ezingavamile. Yenziwe izithako kutholakala kalula futhi elula ukuthi ayatholakala emkhayeni ngamunye.
Ngakho-ke yini esiyidingayo mass ezinjalo? Njengomthetho, isetshenziselwa ukulungiswa iphethini engajwayelekile, senzelwe umhlobiso wamaqebelengwane kanye namakhekhe. Nakuba abapheki ngokuvamile basebenzisa umdwebo mass amnandi futhi ukudala i-dessert ezimele. Kulokhu, Uqweqwe ukwenza izibalo ezahlukene kanye amaphetheni. Uma unquma kusimangaze obathandayo ubumnandi wokuqala, bese sinikeza umumo herringbone, ezihlukahlukene izilwane, amakhekheba eqhwa nokuningi.
Labo abapheki abangamazi kanjani ukudweba amaphethini amahle, usebenzisa ama-stencil ukuze uqweqwe lukashukela. Kungaba izincwadi zezingane izimbali ezinkulu, izilwane, izimvemvane, amakhekheba eqhwa. Kulokhu uthola umhlobiso flat ukuthi kalula unamathele ebusweni ikhekhe noma khekhe.
Uma ufuna ukwenza iphethini ngakuthathu, siphakamisa ukusebenzisa Amakhasi ezimbili. Le ndlela ibizwa ngokuvamile kwakheka izimvemvane likhona nezinye izintambo zezicathulo.
Kunenye inqubo yokuqala, okuyinto uzokwazi ukwenza Uqweqwe eziyinkimbinkimbi imiklamo. Ngokwesibonelo, ekhaya, amakalishi, izihlalo zabakhubazekile, izimoto nokunye. D. Ukuze wenze lokhu kudinga kusengaphambili stencil izingxenye kuncike wagqoka amaprotheni mass zabo besebenzisa kornetika (ngokusebenzisa ifilimu) futhi ushiye ekamelweni lokushisa izinsuku 2. Ekupheleni kwalesi sikhathi, uqweqwe lukashukela Uqinisa ngokuphelele. Ngemuva kwalokhu wonke isakhiwo izinto volumetric Kumele uxhumeke ndawonye usebenzisa obukhulu ushukela isiraphu.
Hlobisa amaphethini amaprotheni
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-stencil ukuze uqweqwe lukashukela. Kodwa uma akwanele ukwenza amaphethini amahle ngakuthathu noma flat ukuthi isiphakamiso okwengeziwe bawahlobise nge khekhe ubuhlalu posypushek nabanye. Nokho, kutuswa ukuba benze kanjalo ngokushesha nje lapho mass amaprotheni lisetshenzisiwe-stencil. Eqinisweni, ngemva uthele Uqweqwe Uqinisa, futhi unamathele kuso ngeke bakwazi yini. Okungenani, uma kungekhona ukusebenzisa isakhi ezifana obukhulu ushukela isiraphu.
Ukusebenza Umdwebo amaprotheni mass
Uma ungazi indlela ukudweba amaphethini akho usebenzisa uqweqwe lukashukela, kutuswa ukusebenzisa izifanekiso ngomumo eyenziwe. Futhi ungakwazi nje zisebenza Umbala izincwadi zezingane. Ngakho, sicabanga kabanzi indlela ukusebenzisa inqubo ngokusebenzisana mass Umdwebo amaprotheni.
1. On the akhethiwe iphepha isifanekiso isicelo epulasitikini noma bawubeke evamile isikhwama esobala kumadokhumenti. Inzuzo enkulu lokhu isikhwama ukuthi mass amaprotheni muhle kakhulu ekuhambeni kwakhe. Uma ukungabaza lokho, khona-ke i-lamabutho kangcono kwakhiwa polyethylene imikhiqizo ifilimu ezigcotshwe nge ungqimba elincanyana zamafutha omnqumo.
2. Asanda walungisa umdwebo amaprotheni mass zafakwa kornetik ekhethekile lapho predetermined ukugqoka umlomo wombhobho efanelekayo. Uma lokhu isikhwama khekhe ungaphenduki ke uvumelane upulasitiki evamile lapho ufuna ukusika ekhoneni.
3. Cindezela Uqweqwe phezu stencil, noma kunalokho, phezu ujenga ifilimu plastic kuso, kufanele kube kancane ngokulinganayo. Ephambi kwezinduna amakhono kwezobuciko, ungenza ngaphandle izifanekiso, ukudweba amaprotheni mass, ayehlome kuphela fantasy. Kufanele kuqashelwe ukuthi Uqweqwe ngokuvamile imali ngqo ungene kobuso confection esiphelele. Ngesikhathi esifanayo, uqaphele ukuthi eziningi umdwebo noma kunjalo ayikwazi ukusetshenziswa ku-ayisikhilimu, ikhekhe noma ezinye ezindaweni ezimanzi.
4. Ngemva Uqweqwe ukuthi otsazhen, kufanele kwesokunxele ukuze ome ekamelweni lokushisa. Kungase kuthathe nawe mayelana 1-3 izinsuku, kuye ngokuthi umklamo kanye nosayizi egumbini nomswakama.
5. yomiswe umhlobiso izinto zisuswe ngokucophelela kusukela substrate bese esetshenziswa ngenhloso eyakhelwe lona. Kuyaphawuleka ukuthi enze ngcono isenzo onqenqemeni a surface flat, kusukela engela ifilimu plastic edonswa phansi ngobumnene.
Njengoba sazi ukuthi imihlobiso enjalo etholakala ziyaqothuka kakhulu, kufanele uzilungiselele esasihambisana isitokwe. Uma umkhiqizo has ukubhubhisa e inqubo ngikhiphe substrate, angasetshenziswa njengendlela dessert ezimele, futhi nje etafuleni nge itiye.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwenza kuyashesha futhi kulula isisindo-Uqweqwe ekhaya. Ukuze uqinisekise ukuthi uye walungisa isisekelo amnandi kahle, sibheke ukungaguquguquki wakhe. Uqweqwe Classic ingadlali ezindaweni ezintweni ezingafanele. Kuleso simo, uma nenqwaba lwamanzi, umkhiqizo kwakhiwa kumelwe kuqala babe ezomile kuze kube uqweqwe endaweni evundlile. Futhi kuphela ke ibekwe phezu lwalugobile.
Uma udinga ukuthola jumpsuit umkhiqizo eyindilinga, mass amaprotheni liyadingeka wagqoka ezinamafutha akahle Balloons eqolo (emoyeni). Ngemva iphele lotions wokubhoboza zabo bese asuswe okuholela igobolondo umhlobiso.
Imihlobiso futhi imifanekiso eyenziwe Uqweqwe zingagcinwa isikhathi eside, uma ezibekwe amabhokisi agcinwe ekamelweni lokushisa. Ngesikhathi nomswakama efanayo egumbini akufanele kube kakhulu.
Kufanele kuphawulwe ukuthi amaphethini mass amaprotheni noma kunjalo ayikwazi agcinwe kule esiqandisini. Eqinisweni, ngemva kokungenwa emoyeni abandayo, basheshe Ziyancibilika. Yingakho imihlobiso pre emise ibekwe amakhekhe ngaphambi kokukhonza kuphela etafuleni zemikhosi.
Indlela ukupheka oatmeal Pudding? jelly Homemade. Ungadliwa, izithombe
Art Minsk Museum: incazelo, embukisweni
Ukuhlobisa kwekhishi kanye nezici zalo
Indlela mhlophe izinzipho ekhaya? izindlela Omkhulu. Eshibhile futhi kwaqinisekiswa.
Gregory Otrepyev - the lokuqala Falsdmitry